Intel Alder Lake Core i9 waa ka dheereeyaa M1 Max, laakiin ciyaarta wasakh ah | waxaan ka imid mac
Intel Alder Lake Core i9 processor wuu ka dheereeyaa M1 Max, laakiin ciyaar wasakh ah
Dhowr toddobaad ka hor, Intel waxay xaqiijisay in processor-keeda cusub Alder Lake Core i9 way ka dheeraysay Apple's M1 Max. Hadda, iyadoo kii ugu horreeyay ee suuqa ku jira uu ku rakiban yahay laptop-ka MSI, isbarbardhigga u dhigma ayaa lagu sameeyay meel ka baxsan shaybaarrada soo saaraha Chip ee Waqooyiga Ameerika.
Runtuna waxay tahay in farsamo ahaan haa, processor-ka cusub ee Intel aad buu u dheereeyaa, laakiin haddii aad u fiirsato xogta, waxaad arkaysaa in dhab ahaantii "guusha" ay tahay ugu yaraan, oo samaynta laba "trapdoors" si ay u awoodaan inay sameeyaan. ayuu yidhi.
Warqad ahaan, haddii aan ku dhajino oo kaliya xogta uu codsigu tuurayo Geekbench, bartilmaameedka imtixaannada waxqabadka processor-ka, Intel waxay sheegan kartaa in Alder Lake Core i9 chip uu ka dhaqso badan yahay Apple's M1 Max.
Laakiin runtu waxay tahay, haddii aad eegto sida imtixaanka loo fuliyo, iyo shuruudaha, runtu waxay tahay in Intel aysan wax badan ka heli karin hadalkaas xoogga leh.
Tijaabooyinkan Geekbench waxaa lagu sameeyay laptop si gaar ah loogu talagalay ciyaaraha MSI GE76 Raider. Iyo natiijooyinka awoodda wax-soo-saarka cayriin ee i9, aad bay u wanaagsan yihiin, laakiin waxay kaliya ku garaacday M1 Max 5%. Aad u cadaalad ah, runtii.
Geekbench 5's Tijaabada Multi-core CPU, Alder Lake Core i9 wuxuu lahaa 5 boqolkiiba hogaanka Apple. Tijaabada hal-abuurka ah, horumarka Alder Lake wuxuu ahaa 3,5 boqolkiiba. taasi waa asal ahaan xidhidh. Farqiga aan la fahmi karin ee isticmaalaha, shaki la'aan.
I9 wuxuu cunaa saddex jeer in ka badan M1 Max
Laakiin Intel si cadaalad ah uma ciyaarin si ay u noqoto guusha. Intii lagu guda jiray tijaabada Cinebench R23 multi-core, Laptop-ka Alder Lake wuxuu si joogto ah u cunayay in ka badan 100 watts, iyadoo meelaha ugu sarreeya ay u dhexeeyaan. 130 iyo 140 watts. Haddii aan barbar dhigno isticmaalka M1 Max, oo ahaa 39,7 watts, aynu nidhaahno in aad noqoto Processor-ka Laptop-ka ma aha faa’iido.
Markaa haddii aan ka saarno MSI-ga hadda korantada, oo aan u isticmaalno batteriga, awoodda weyn ee i9-ka si aan u “ka gudubno” M1 Max waxay sii socotaa taah, halka processor-ka Apple aad leedahay madax-bannaani dhowr saacadood oo dhibaato la'aan ah.
Iyo "dabinka" labaad wuxuu ku saabsan yahay waxqabadka garaafyada ee laptop-ka MSI. Haddii aad ku dhejiso laptop-kaas Core i9 gaming iyo GPU-giisa Nvidia RTX3080Ti, si hubaal ah, kala duwanaanshuhu waa kuwo aad u weyn haddii aad u barbar dhigto garaafka gudaha ee M1 Max.
MSI waxay ku guulaysataa dhibcaha OpenCL ee 143.594 ka dhanka ah 59.774 Tusmada ugu hooseysa ee M1 Max. Laakiin taasi maaha is barbar dhig dhab ah. Isticmaalka kaliya GPU-da isku dhafan ee processor-ka Intel, arrimuhu aad bay uga duwan yihiin. Halkaa Intel waxay heshay oo kaliya 21.097 Dhibco.
Marka la soo koobo, Laptop-ka MSI GE76 Raider wuxuu awood u leeyahay inuu ku tuujiyo processor-ka i9 si uu uga dhaafo xawliga M1 Max 5%, laakiin ku xidhan, sababtoo ah wuxuu gaarayaa xawaarahaas oo cunaya saddex jeer in ka badan processor-ka Apple.
Iyo waxqabadka garaafyada, waxay ku guulaysataa MSI ilaa intaad isticmaaleyso jaantus ah loogu talagalay ciyaaraha Nvidia RTX3080 Ti. Haddii aad ka soo jiidato midda isku dhafan ee Intel, waxaad luminaysaa isbarbardhigga midka isku dhafan ee M1 Max. Taasi waxay tidhi, i9 ayaa ku guulaysta, laakiin khiyaamaynta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » MacBook Pro » Intel Alder Lake Core i9 processor wuu ka dheereeyaa M1 Max, laakiin ciyaar wasakh ah
macOS 12.2 hadda diyaar ah si loo xaliyo arrimaha Safari